March 31, 2019 – Kichuu
Taabonni samiirraa nuuf bu’e jedhee lafa hamma kanaa
Taabonni samiirraa nuuf bu’e jedhee lafa hamma kanaa saamuuf ture ilmi baaladaraa ofiin jedhee of waamu Iskindir Naggaa jedhamu suni. አረ የአማኑኤል ያለ😃 Tooftaa #Nafxanyaan ittiin lafa Oromiyaa saamaa turteefi saamaa jirtu kunooti. ከ150 አመት በፊት ይሰራ [Read More]
Koyyee-Faccee: TAABOTA 44 ture Amma 45 f olgudatee Jira.
#Koyyee #Faccee: TAABOTA 44 ture Amma 45 f olgudatee Jira. Namicha sobee lafa qote bulaa keessa #Taabota kaa’ee Taabotatu Samii irraa gadi bu’e jedhee iyye. Mataa isaa irra maaltu jiraa? Suuraan ni dubbata. Silaa wantoota akkanaa warruma hordoftoota [Read More]
FINFINNEE BOOLEE:Weellisaa Caalaa Bultumee sirna ..
#FINFINNEE_BOOLEE: Weellisaa Caalaa Bultumee sirna kabaja hundeeffama ODP Waggaa 29ffaa fi injifannoo oromoo waggaa 1ffaa Finfinnee boolee keessatti kabajame irratti!! Amma yeroon ” nuufiis hin xinxalinaa, nuttis hin xinxalinaa ” jedhu irra geenyee fakkaata. Mohammednur [Read More]
Dubbii JAAL MARROO KANA SIRRIITTI DHAGGEEFFADHAA!!
Dubbii JAAL MARROO KANA SIRRIITTI DHAGGEEFFADHAA!! 👂👂 AMMA JAALLATTES JIBBITES HIN LIQIMSITAGAA DUBBII KANA!! JAAL MARROO _25_3_2019 ODM-Oogganaan WBO Dhihaa Jaal Marroo Kumsaa Dhimma Hiikkannoofi Xawalwwaallota, 03/27/2019 Qeerroo Seenaa Qabsaa’aa Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir. Baakkoo
ተፈናቃይ በመምሰል እርዳታ ሲያሰባስቡ የተያዙ ግለሰቦች
ተፈናቃይ በመምሰል እርዳታ ሲያሰባስቡ የተያዙ ግለሰቦች በእስራትና በገንዘብ ተቀጡ አዲስ አበባ ፣ መጋቢት 22 ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ከወለጋ እንደተፈናቀሉ በማስመሰል በጅማ ከተማ ህብረተሰቡን በማጭበርበር እርዳታ ሲያሰባስቡ እጅ ከፍንጅ የተያዙ ሁለት ግለሰቦች በእስራትና በገንዘብ [Read More]
Egypt president raises minimum wage, now $116 from $70 (africanews)—Egypt’s President Abdel Fattah al-Sisi has raised the country’s minimum wage to 2,000 Egyptian pounds ($116) a month from 1,200 pounds, he said at an event [Read More]
What’s in a number: Why Ethiopia has postponed its census
What’s in a number: Why Ethiopia has postponed its census The count is always contentious because it confers money and power (Economist)—-IN ETHIOPIA, Africa’s second most populous country, it is often difficult to distinguish politics [Read More]
Oduu Gaddaa: Odeeffannoon argannee namni gaditti argitan maqaan ishee Hayaat Diinii jedhamti. Odeessi nu gahe Hayaat Diinii namoota bara darbe Lola Liyyuu Ayilii daangaarraan Oromoota Baha jiraatan irratti banamee hedduun buqqaa’an keessaa nama tokko turte. [Read More]
One year on, tough times loom for Ethiopia’s Abiy Ahmed Chris Stein AFP Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed took office following the resignation of his predecessor Hailemariam Desalegn, after more than two years of anti-government [Read More]
Qeerroo fi Qarree: ”Sabboontoota sabaa magaalaa Adaamaa fi Naannoo isheetti argamtaan hundaaf. #Bitootessa 23/3/2019 Boru ganama sa’aa 2:30 irratti Qeerroo fi Qarreen, Sabboontootnii fi quuqqamtootni dhimma Oromoo hundi walitti dhufuun maree dhimma lola daangaa gama Aanaa #Booset fi [Read More]